❣️Secluded Getaway Staycation+SunsetPool@megananda - I-Airbnb
Payangan, Bali, i-Indonesia
Ingabe unesithukuthezi futhi ukhathele ukuvalelwa futhi ulangazelela indawo entsha nomoya omusha ongavele uhlukane nawo izinsuku ezimbalwa, isonto noma inyanga?Sinayo impendulo. I-villa yethu yangasese yangasese ine-Private Sunset Infinity Pool ebabazekayo ebheke ekubukeni kwensimu yerayisi eluhlaza, sihlanganisa ukunethezeka kokuphila kwesimanjemanje kanye nokuphila okungavamile kwezindawo ezishisayo nokuthinta i-Balinese Art okudala umuzwa wokuhlala oyingqayizivele,
Inikezelwe kubantu abajabulela isikhathi sekhwalithi abathanda ukuxutshwa nemvelo.
Le villa iklanywe ngokukhethekile ngokuhlanganisa ukuphila kwesimanjemanje kanye nokuthintwa kwe-Balinese Art, inikezelwe kubantu abathanda futhi abazisayo imvelo, izungezwe umbono wensimu yerayisi eluhlaza ikunikeza umuzwa wokushajwa futhi ukhululeke, i-“ Ace yethu. indawo” eduze nezindawo eziningi okufanele zivakashelwe e-Ubud.
Woza uzozizwela indlela entsha yokuphunyuka kanye ne-chillax
4.93 · 283 okushiwo abanye
I-villa yethu itholakala kumakhelwane nomphakathi onobungane kakhulu, izungezwe abantu abajabule ikunikeza umuzwa womoya omuhle.
Ngiyakuthanda ukuzijabulisa nesivakashi ngangokunokwenzeka kodwa futhi ngiyatholakala ku-WhatApp nganoma yisiphi isikhathi ukuze uthole ulwazi nanoma yiluphi usizo oluphuthumayo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Payangan namaphethelo